ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်မှာ အရိုးကျန်းမာရေးကို ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းမလဲ? - Chit MayMay
Home Lotaya ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်မှာ အရိုးကျန်းမာရေးကို ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းမလဲ?
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်မှာ အရိုးကျန်းမာရေးကို ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းမလဲ?
ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေတဟာ သန္ဓေသားရဲ့ အရိုးကို ဖွံ့ဖြိုးစေဖို့အတွက် ကယ်လစီယမ်များစွာ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါက နောက်ဆုံးသုံးလပတ်ကာလအတွင်းမှာ အထူးသဖြင့် မှန်ကန်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေတဲ့ မိခင်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကနေ ကယ်လ်စီယမ် မရရှိတဲ့အခါ ကလေးက မိခင်ရဲ့အရိုးကနေ ကယ်လ်စီယမ်ကို ဆွဲယူသုံးစွဲရပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် တစ်လျှောက်လုံး ကယ်လစီယမ် အလုံအလောက်ရစေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကံအားလျော်စွာပဲ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ် အမျိုးသမီးတွေဟာ အောက်ပါနည်းလမ်းများဖြင့် ကယ်လ်ဆီယမ်ကို ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင် မဟုတ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေထက် အစားအစာနှင့် ဖြည့်စွက်စာတွေကနေ ကယ်လ်စီယမ် စုပ်ယူခြင်းမှာ ပိုကောင်းပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်ရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာဟာ အက်စထရိုဂျင်ကို ပိုမိုထုတ်လုပ်ပါတဘ်။ အီစထရိုဂျင်ရဲ့ ထူးခြားတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုက အရိုးတွေကို အကာအကွယ်ပေးပြီး သန်မာစေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အချို့အမျိုးသမီးတွေဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီးနောက် အရိုးသိပ်သည်းမှု လျော့ကျခြင်းကို သတိပြုမိနိုင်ပါတယ်။ သို့သော် ၎င်းက မွေးဖွားပြီးနောက်လတွေမှာ (သို့) အမျိုးသမီးတစ်ယောက် နို့တိုက်ကျွေးပြီးနောက်မှာ ပြန်လည်ရရှိပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းက ပုံမှန်အားဖြင့် အရိုးကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းတယ်လို့ ယူဆကြပါတယ်။ အချို့သော သက်သေအထောက်အထားများအရ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်များလေလေ အရိုးသိပ်သည်းဆများလေလေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက အရိုးကျိုးလွယ်တဲ့ အန္တရာယ်နည်းတာကိုလည်း ညွှန်ပြနေပါတယ်။
ရှားပါးတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေမှာတော့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းနှင့် နို့တိုက်ကျွေးခြင်းက အမျိုးသမီးတွေအား အရိုးအားနည်းခြင်း၊ အရိုးကျိုးခြင်း အန္တရာယ်ကို တိုးစေတဲ့ အရိုးပွရောဂါကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ ဒါက ဆိုးရွားတဲ့ အခြေအနေတစ်ခု ဖြစ်သော်လည်း အမျိုးသမီးအများစုဟာ ကလေးမွေးပြီးနောက်မှာ အရိုးဆုံးရှုံးမှုကို ပြန်ပြီး recover လုပ်ပေးပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်ကကြည့်ရင်ဆယ်ကျော်သက်မိခင်တွေဟာ နောက်ပိုင်းမှာ အရိုးဆုံးရှုံးခြင်းနှင့် အရိုးပွရောဂါ ဖြစ်နိုင်ချေ ပိုများနိုင်ပါတယ်။ ဒါက သူတို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ စုစုပေါင်းအရိုးထုထည်ကို မတည်ဆောက်နိုင်သေးသလို ကလေးကြီးထွားမှုအတွက် သူမရဲ့ bone mass ကို အထိခိုက်ခံရတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်နှင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီးမှာ အရိုးဆုံးရှုံးမှုအန္တရာယ်ကို အနည်းဆုံးဖြစ်စေဖို့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေဟာ ကျန်းမာတဲ့ ဘဝပုံစံကို လိုက်နာဖို့လိုအပ်ပြီး အစားအသောက်ထဲမှာ ကျန်းမာသန်စွမ်းသော အရိုးတွေကို အထောက်အကူပြုပေးမယ့် အစားအစာတွေ ပါဝင်ရပါမယ်။ သင့်ရဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မှုအတွက် အရိုးအားဖြည့်ပေးတဲ့ အကြံပြုချက်တွေကို အောက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
၁။ ကယ်လ်စီယမ် အလုံအလောက် ရယူပါ
ကယ်လ်ဆီယမ်ဟာ အရိုးကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းမွန်တာကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ အလုံအလောက်ရရှိစေဖို့ သေချာပါစေ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေအတွက် အကြံပြုထားတဲ့ ကယ်လစီယမ် ပမာဏက တစ်နေ့လျှင် မီလီဂရမ် ၁၀၀၀ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင် ဆယ်ကျော်သက်တွေဟာ တစ်နေ့လျှင် မီလီဂရမ် ၁၃၀၀အထိ စားသုံးဖို့ အကြံပြုပါတယ်။
နို့၊ ဒိန်ခဲနှင့် ဒိန်ချဉ်ကဲ့သို့သော နို့ထွက်ပစ္စည်းများ
ကိုက်လန်၊ ဘရိုကိုလီ၊ ဂေါ်ဖီထုပ် ကဲ့သို့သော အစိမ်းရောင်အရွက် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ
ကယ်လစီယမ်အာနိသင်ဖြည့်ထားတဲ့ စီရီရယ်နှင့် ပေါင်မုန့်
ကယ်လ်စီယမ်ပါဝင်တဲ့ လိမ္မော်သီးဖျော်ရည်နှင့် ပဲပုပ်ဖျော်ရည်
၂။ အရိုးကျန်းမာရေးအတွက် ဗီတာမင်ဒီ
သင်နှင့် သင့်ကလေးအတွက် ကျန်းမာသန်စွမ်းသော အရိုးတွေကို သေချာစေဖို့ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ဟာ ဗီတာမင် ဒီ ရရှိနေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေကို နေ့စဉ် 600 IU စားသုံးဖို့ အကြံပြုပါတယ်။ ဒီဟာက အစားအစာတစ်ခုတည်းကနေ အောင်မြင်ဖို့ ခဲယဉ်းပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေအနေနဲ့ အကြံပြုထားတဲ့ ပမာဏကို ရရှိဖို့ ဖြည့်စွက်စာသောက်ဖို့ အကြံပြုပါတယ်။
ဗီတာမင်ဒီရဲ့ အရင်းအမြစ်ကောင်းများဖြစ်သော အစားအစာတွေက ကြက်ဥအပါအဝင် မက်ကရယ်ငါး၊ ဆားဒင်း၊ ဆော်လမွန်ငါးကဲ့သို့သော အဆီငါးတွေနဲ့ စီရီရယ် စတာတွေဖြစ်ပါတယ်။
၃။ ကျန်းမာတဲ့ လူနေမှုဘဝပုံစံကို လိုက်နာပါ
မျှတသော အစားအစာတွေစားပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ် ကျန်းမာရေးနှင့် မညီညွတ်သော အလေ့အထတွေရှောင်ပါ။ ကယ်လစီယမ်နှင့် ဗီတာမင်ဒီအပြင် မေမေနှင့် မေမေတို့ကလေးရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် မျှတတဲ့ အစားအစာတွေကို လိုက်နာဖို့ မဖြစ်မနေ လိုအပ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ နေ့စဉ်အစားအစာမှာ သစ်သီးတွေ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ၊ အခွံမာသီးနှင့် ပဲမျိုးစုံကို ထည့်သွင်းပေးပါ။
ရေဓါတ်ပြည့်ဝအောင် ထိန်းသိမ်းပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် အရက်သောက်ခြင်းနှင့် ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းရှောင်ပါ။ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းက အဆုတ်၊နှလုံး၊ အရိုးတွေနှင့် ကလေးအတွက်လည်း မကောင်းပါဘူး။
လေ့ကျင့်ခန်းက အရိုးတွေကို သန်မာစေပါတယ်။ သို့သော် ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းက အန္တရာယ်ကင်း/မကင်းဆိုတာ စစ်ဆေးဖို့ ဆရာဝန်နှင့် အရင်ဆုံးတိုင်ပင်ပါ။ လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ ပြေးခြင်း၊ ကခြင်းနှင့် လှေကားတတ်ခြင်းစတဲ့ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု လေ့ကျင့်ခန်းတွေက အရိုးကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းမွန်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်အတွင်း လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို ဆရာဝန်နှင့် ဆွေးနွေးပါ။ တတ်ကြွစွာ လုပ်ဆောင်ခြင်းက သင့်ရဲ့ အရိုးတွေကို ပိုခိုင်မာစေရုံသာမက ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် အံ့သြဖွယ်ကောင်းတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုလည်း ရရှိစေပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းက စိတ်နေစိတ်ထားကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ စွမ်းအင်ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ဟန်အနေအထားကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းက ခန္ဓာကိုယ်ကို ပြောင်းလဲစေပြီး အရိုးတွေကို သက်ရောက်စေပါတယ်။ ယခုဆောင်းပါးလေးက သင့်အားအရိုးကျန်းမာရေးရဲ့ အရေးပါပုံနှင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ကျန်းမာသန်စွမ်းသော အရိုးတွေကို ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းရမယ်ဆိုတာကို နားလည်ဖို့ ကူညီပေးလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။
Previous articleကလေးရဲ့ စိတ်လိုက်မာန်ပါ လုပ်တတ်တဲ့ အပြုအမှုကို နားလည်ခြင်း
Next articleရာသီဥတုအပြောင်းအလဲကြောင့် သားသားမီးမီးတို့ မဖျားနာအောင် ကာကွယ်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းများ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်အတွင်း အရေပြားမည်းလာခြင်းကို ဘယ်လိုကုစားမလဲ?